राजा काँग नगद | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! राजा काँग नगद | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
राजा काँग नगद राजा रूपमा जंगल शासन छ कि एक विशाल गोरिल्ला को विषय मा आधारित स्लट खेल हो. धेरै चलचित्र यस शानदार जनावर मा गरिएको छ तर त्यहाँ आधारित धेरै केही खेल. यस फोन बिलिङ स्लट खेल, त्यहाँ पाँच रील र 20 paylines. खेल बाक्लो केले खेत र राजा कोंग लागि एउटा ढुङ्गा सिंहासन एउटा रसीला वन को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. उहाँले आफ्नो टाउको मा मुकुट र अधिकांश समय सुतिरहेको संग बस्छन. त्यहाँ आफ्नो मुड सक्रिय राख्छ पृष्ठभूमिमा राम्रो जंगल बिट संगीत छ. तपाईं £ 0.20 को मूल्य सुरू हुने शर्त र माथि £ 500 प्रति स्पिन यसलाई हुर्काउन सक्छन्.
यो अद्भुत फोन बिलिङ स्लट खेल निलो छापा विकास भएको थियो. तिनीहरूले संसारमा एक अग्रणी अनलाइन क्यासिनो खेल समाधान प्रदायक हो. तिनीहरूले साथै खेल मोबाइल उपकरणहरूमा नाटक सिर्जना गर्न तिनीहरूलाई सक्षम छ कि उन्नत गेमिङ प्रविधिहरू मा विशेषज्ञता संग एक समृद्ध अनुभव छ.
यो फोन बिलिङ स्लट खेल केही आकर्षक कार्टुन शैली प्रतीक हो. त्यहाँ crocodiles छन्, सुगा, बाघ र गेम लोगो उच्च मूल्य प्रतीक संग गैंडा. लोगो संग उच्चतम दिन्छिन् 500 पाँच प्रतीक landings मा सिक्का. जे, Q, K र खेल कार्ड एक तल्लो वर्ग प्रतीक हो. त्यहाँ केही थप बोनस सुविधाहरू देखि जीत मदत दुई बोनस प्रतीक हो. तिनीहरूले सुन सिक्का एक बैरल साथ राजा कोंग आफूलाई को प्रतीक हो.
जंगली प्रतीक: सुन सिक्का को काठ बैरल जंगली सुविधा छ र यो सबै अन्य प्रतीकहरू लागि कवर राजा कोंग पल्ट. एक payline मा जंगली प्रतीक पाँच तपाईं गर्न को एक विजेता खम्बा दिन्छ 500 पटक पनि.
निद्रा लागेको हांगकांग: राजा कोंग आफ्नो पत्थर सिंहासनमा सबै समय सुतिरहेको छ. अनियमित खेल समयमा, उहाँले आफ्नो bazooka प्रयोग गरेर स्लट केही बोनस सुविधाहरू थप्न अप wakes. सुनको बैरल स्पिन, केले wilds, बोनस बढावा र स्पिन लकीर उहाँले दिएको बोनस छन्.
राजा काँग स्क्याटर: राजा कोंग को प्रतीक यस फोन बिलिङ स्लट खेल को स्क्याटर सुविधा छ. तीन वा यो प्रतीक बढी एक स्पिन समयमा बोनस स्तर ट्रिगर. तपाईं चार सुविधाहरू कुनै एक जित्न सक्छौं र तिनीहरूले बैरल विस्फोट गर्दै छन्, साम्राज्य मुक्त spins, निशान बोनस र सुनको मुक्त spins.
सारांश: यो केही फोन बिलिङ एक शक्तिशाली गोरिल्ला आधारित स्लट को छ, किंग कोंग. मन उड्ने ग्राफिक्स र बोनस सुविधाहरू, तपाईं सजिलै दिन को अन्त द्वारा विशाल लाभ बनाउन आशा गर्न सक्छौं.